China 321 inopisa anokungurutsa Stainless simbi coils gadzira uye fekitari | Huaxiao
321 simbi isina simbi isimbi yakasimba-yakasimba, iyo inopesana nekupisa kwakanyanya kupfuura 316L. Iyo ine zvirinani kuora kurwisa mu organic acids pakasiyana materu uye pane akasiyana tembiricha, kunyanya mune oxidizing midhiya. 321 simbi isina tsvina inowanzo shandiswa mukugadzira ducts, midziyo isingaome acid uye midziyo inodzivirira kupfeka.
Sino Stainless Simbi Kugona nezve 321 / 321H Hot yakakungurutswa simbi isina simbi coil , 321 / 321H HRC
321 Same giredhi kubva kune akasiyana nyika muyero
321 Chemical chikamu ASTM A240:
C：≤0.08 ，Si ：≤0.75 Mn ：≤2.0 ，Cr ：17.0～19.0 ，Ni ：9.0～12.0，　S ：.00.03 ，P ：.00.045 N: 0.1, Ti: 5X (C + N) Min～ Max
321H Chemical chikamu ASTM A240:
C：0.04～0.1 ，Si ：≤0.75 Mn ：≤2.0 ，Cr ：17.0～19.0 ，Ni ：9.0～12.0，　S ：.00.03 ，P ：.00.045 N: 0.1, Ti: 4X (C + N) Min～ Max
321 / 321H michina chivakwa ASTM A240:
Tsananguro nezve 321 / 321H simbi isina simbi uye uchienzanisa neyakajairika 304
Ese ari matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nematatu ndiwo mazana matatu esimbi anoteedzana uye ane musiyano mudiki pakuramba ngura. Nekudaro, mune isina kupisa mamiriro e500-600 degrees Celsius, 321 simbi isina simbi inoshandiswa zvakanyanya. Pamusoro pezvo, simbi isingadziye kupisa yakagadziridzwa kunze kwenyika uye inonzi 321H. Yayo kabhoni yezvinyorwa yakakwira zvishoma pane iyo ye321, yakafanana neyemumba 1Cr18Ni9Ti. Huwandu hwakakodzera hwaTi hunowedzerwa kune simbi isina chinhu kuti ivandudze kupokana kwayo necorrgrular corrosion. Izvi zvinokonzerwa nekuti mune yekutanga nhanho yekugadzira simbi isina chinhu, nekuti iyo yekunyungudisa tekinoroji yanga isina kukwirira zvakakwana kudzikisira kabhoni mune yesimbi, zvaingokwanisika kuita izvi nekuwedzera zvimwe zvinhu. Nekufambira mberi kwetekinoroji, zvave zvichikwanisika kugadzira yakaderera-kabhoni uye ultra-yakaderera-kabhoni simbi isina simbi mhando. Naizvozvo, zvigadzirwa makumi matatu nemana zvakashandiswa zvakanyanya. Panguva ino, hunhu hwekupisa kupisa kwe321 kana 321H kana 1Cr18Ni9Ti zviri pachena.
304 iri 0Cr18Ni9Ti, 321 yakavakirwa pa304 pamwe neTi yekuvandudza maitiro ehurongwa hwemukati.
321 simbi isina tsvina umo Ti iripo sechinhu chinodzikamisa, asi zvakare iri inopisa-simba simbi mhando, iri nani kwazvo kupfuura 316L mune yakanyanya tembiricha. 321 simbi isina chinhu mu organic acids yekusiyana kwakasiyana, tembiricha dzakasiyana, kunyanya mune inogadzirisirwa yepakati Kunaka kwekurwiswa kwemabrasion, yaigadzirwa kugadzira linings uye kuendesa mapaipi ezvekupfeka-zvinopesana nemidziyo yeasidhi nemidziyo inopfeka.
321 simbi isina simbi ndeye Ni-Cr-Mo mhando austenitic simbi isina chinhu, mashandiro ayo akafanana chaizvo ne304, asi nekuda kwekuwedzera kwesimbi titanium, ine kurwisa kuri nani kune zviyo muganho ngura uye yakasimba tembiricha simba. Nekuda kwekuwedzera kwesimbi titanium, inonyatso kudzora kuumbwa kwechromium carbide.
321 Stainless simbi ine yakanyanya kushushikana Kubvaruka kuita uye kwakanyanya kupisa tembiricha (Creep Resistance) kushushikana kwema mechanical zvimiro zviri nani pane 304 simbi isina waya.
Pashure: 310s inopisa yakakungurutswa simbi isina simbi coil
Zvadaro: 410 410s inopisa yakakungurutswa simbi isina simbi coil